Nezvedu - Shandong Buluoer Intelligent Technology Co, Ltd.
Shandong Buluoer Intelligent Technology Co, Ltd. Iyo kambani yakabatana neShandong Jubangyuan Machinery Group.Specializes mu CNC Plasma yekucheka muchina, CNC murazvo wekucheka muchina, Laser yekucheka michina, Welding michina, CNC system uye inoshanda zvikamu zvekutsvaga nekuvandudza, kugadzira, kugadzira, kutengesa Kambani yeboka iri yepamusorosoro bhizinesi rine makore makumi maviri nemana ekugadzira michina yekugadzira. Iyo ine yehunyanzvi R&D timu uye yawana makumi maviri neshanu emvumo yenyika patent.
Iyo kambani yapfuura IS09001 yemhando yepamusoro sisitimu sisitimu. Zvinoenderana nezvinodiwa neIS014001 manejimendi manejimendi manejimendi, inonyatso kudzora ese matunhu ezvigadzirwa, kugadzira, muchina uye kutumira kuti zvionekwe mashandiro uye mhando yezvigadzirwa .Multiple zvigadzirwa zvakasimbiswa.
Buluoer Intelligent ine zvakakwana zvekutengesa uye mushure-yekutengesa masevhisi ekushambadzira muindastiri, uye kumisikidza rakakosha indasitiri sevhisi department kuti ipe maitiro ekuongororwa uye yakazara laser kucheka, plasma murazvo wekucheka, otomatiki welding application mhinduro uye isiri-yakajairwa maitiro kune vatengi vakasiyana.
Shandong Buluoer Intelligent Technology Co, Ltd inoshanda nemagetsi ekucheka laser, plasma yekucheka michina, simbi pombi inokamhina waya yekucheka muchina, zvishandiso zvemagetsi, CNC system uye inoshanda zvikamu R&D, dhizaini, kugadzira, kutengesa uye sevhisi.Iye mutungamiri wehupfumi hweChina. CNC yekucheka muchina. Iyo "yakakosha uye itsva" bhizinesi muJinan.
Zvigadzirwa zvekambani zvine kodzero zhinji dzakazvimirira dzepfuma, mazhinji ehunyanzvi patent uye software copyright. Zvigadzirwa zvakapfuura ISO 9001 zvemhando yekuremekedza uye zvakanyatso kutengeswa kumba nekune dzimwe nyika. Ivo vanorumbidzwa nevashandisi vekumba uye vekunze kune avo ane hupfumi uye anoshanda zvigadzirwa, iri nyore uye yakavimbika mashandiro. Iyo kambani inokupa iwe inogoneka yekuverenga kudzora yekucheka mhinduro zvinoenderana neyakajeka uye inokatyamadza mweya wekuita uye pfungwa yehunhu. Gadzira runako pamwe chete.
Desktop plasma nhamba yekudzora yekucheka muchina
Gantry murazvo plasma nhamba yekudzora yekucheka muchina
Yakabatanidzwa CNC Kucheka Muchina weGantry Tube Plate
CNC Kucheka Muchina weGantry Slab
Tichaedza kubatsira kupa mhinduro yedu yakanaka kwazvo kwauri.